Mayelana nokuthi ukuhlolwa kwegazi kwezempilo kusho
Sonke kufanele sithathe ukuhlolwa kwegazi ngezikhathi ezithile. Nakuba ngokuvamile igama elithi "i-akhawunti" lapha alikho into engafanele. Kuhle ukunikela ngegazi okungenani kanye ngonyaka, nangemva kweminyaka engu-40 - njalo ezinyangeni eziyisithupha. Ufuna ukwazi ukuthi ukuhlolwa kwegazi kusho ukuthini? Joyina manje.
Ngemuva kokuthola umphumela wokuhlaziywa, ungakwazi ukuqonda ngokushesha ukuthi yimiphi imigomo engaphakathi kwemingcele yesimiso, okuyizinto ezithintekayo noma ezincishisiwe. Ngifuna nje ukuqonda ukuthi lawa magama asho ukuthini. Udokotela akahlali echaza ngokuningiliziwe isikhundla ngasinye, kaningi isipheshana esinemiphumela futhi umane ungene ekhadini. Kuningi lokuhlolwa kwegazi. lokhu - enye yezindlela ezinokwethenjelwa kakhulu zokuxilongwa, ngoba igazi lithwala izitsha zethu, phakathi kwezinye izinto, ulwazi oluningi oluwusizo. Ukuhlola igazi kwegazi kuyamiswa uma ukuhlaziywa kwemitholampilo kubonisa ukuphambuka okujwayelekile. Igazi lizinikela emthonjeni. Ukuhlola igazi kwegazi kunganciphisa ukusebenza kahle kwesibindi, izinso, kwembula inqubo yokuvuvukala esebenzayo, inqubo ye-rheumatic, kanye nokwephulwa komzimba wamanzi nosawoti kanye nokungalingani kwe-microelements. Ukuhlaziywa kwamakhemikhali kuzosiza ekunqumeni ukubunjwa kwamaprotheni wegazi, inani le-glucose, imingcele yerea (i-nitrogen esele) kanye ne-creatinine, kanye nezinga le-cholesterol, inani le-bilirubin. Ngendlela, ukuhlaziywa kwe-biochemical udokotela ngokuqinisekile kuzokusiza ukucacisa futhi, uma kwenzeka noma iyiphi inkomba iphulwa, ukuhlolwa kwegazi kuzoqhubeka nokuzimisela okwengeziwe kwezakhi zokulandelela. Lena imininingwane encane kuphela mayelana nezinhlobo ezimbili ezivame kakhulu zokuhlolwa kwegazi. Njenganoma yisiphi esinye isitho, igazi libhekene nezifo ezihlukahlukene. Awukwazi ukutholakala ngokumane ebuka esibukweni noma ekwamukelweni jikelele nomtholampilo. Bathi, ngeshwa, babonakala kaningi kancane kancane. Kunezifo eziningi zegazi. Ngaphandle kwezifo ezingavamile, njengokuthi, i-hemophilia, okuyinto isifo esiyinzalo futhi idluliselwa emgqeni wesifazane, nakuba abantu begula (isibonelo, insizwa uCesarevitch Alexey yamukeliswa isihlobo sayo - iNdlovukazi yaseNgilandi), kukhona nalabo abangakwazi vuka kunoma yimuphi umuntu.
Isifo segazi, okunciphisa inani lamaseli abomvu egazini, noma okuqukethwe kwe-hemoglobin ku-erythrocytes.
Ukukhiqizwa kwe-erythrocytes noma i-hemoglobin, ukulahlekelwa ama-erythrocyte lapho kwenzeka ukuphuma kwegazi okukhulu, ukubhujiswa okusheshayo kwama-erythrocyte. Ukuthuthukiswa kwe-anemia kungase kuhlotshaniswe nezifo ze-hormonal, ukuyeka esikhathini, ukungondleki, izifo zamathunjini, izimo ezizenzakalelayo. Kwenzeka ukuthi i-anemia iyisifo esivumelanayo sezifo zangaphakathi, izifo ezithathelwanayo nezifo ezingokwemvelo.
1) Ubuthakathaka, ukulala, ukukhathala okwenyuka, ukwehlisa ukusebenza kahle.
2) Ukushintsha isimo sengqondo, ukucasula.
3) Insizwa, isizungu, izintambo, "izimpukane" phambi kwamehlo.
4) Ukuphefumula nokuphefumula kwenhliziyo nokuzikhandla kancane noma ukuphumula.
Ngaphansi kweminyaka engamakhulu amabili edlule, abantu baqala ukuhlukanisa igazi ngamaqembu. Kodwa-ke, imibono yokuthi abathwali beqembu elithile abahlukene kangakanani - bayanele. Ngokuyinhloko, kunezikhathi ezivamile ezivumela umuntu ukuba athi mayelana nezidalwa zezifo. Kuyaziwa ukuthi iqembu lokuqala legazi lalinguqobo: amaqembu aqala ukuvela A no-B. Futhi-eNyakatho-West Yurophu, B - e-East Asia. Phakathi kwabe-Yurophu, i-blood group A iyingxenye enkulu. Ingxenye yamaHindu, amaShayina namaKorea anamaqembu egazi B, phakathi kwabantu baseYurophu, ukuba khona kweB kusuka entshonalanga kuya empumalanga kuyanda. Thola ukuthi ukuhlolwa kwegazi kusho yini futhi ube nempilo! Inhlanhla!
Isitshalo sokhula, izakhi zokwelapha
Izindlela eziphumelela kunazo zonke zamazinyo ukugcoba
Kubangelwa kanye nokwelapha ubuhlungu bokubuyela emuva
Kuthiwani uma i-rhinitis ingunaphakade?
I-intanethi - izitolo. Yini ekhangayo?
Indlela yokuthuthukisa nokusebenzisa ngempumelelo intuition?
I-Nicotine nomphumela wayo empilweni
Indlela yokulungiselela umshado - amathiphu ochwepheshe
Isinkwa esibhakabhaka nge ushizi nemifino
I-Cocktail Yomhlaba Wonke
Ukhilimu we-Cream-chocolate ogcwele ubisi oluncibilikile
Ukudla okudume kakhulu futhi okuphumelelayo
Igumbi lokulala ngesitayela samaRoma nesiShayina yiyona ndlela yokugcina yefashini
Massage ye-ultrasonic ebusweni